राेल्पाकाे पुर्व पश्चिम जाेड्ने मुख्य सडककाे परेमा खाेलामा पुल नुहँदा वषार्तमा मानिसहरू जाेखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य – रोल्पा समाचार
२०७७ श्रावण ८, बिहीबार १४:०८ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ श्रावण ८, बिहीबार १४:०८ गते
रोल्पा जिल्लामा शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै भौतिक विकास धेरै भएको छ । तर, नागरिकको स–साना आवश्यकताहरु अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्ता रोल्पा नगरपालिका–७ स्थित परेमा खोलामा वर्षात समयमा सहजै आवतजावत गर्न मिल्ने पुलको आवश्यक छ ।
यस खोलामा पुल नहुँदा वर्षातको समयमा पैदल तथा मोटर साइकलको यात्रुहरु खोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस खोलमा वारपारका लागि एउटा पुलको आवश्यक छ । माडी गाउँपालिका–६ कोर्चाबाङ रोल्पा निबासी दलबहादुर बि.क.ले भन्नुभयो,‘म केही दिनदेखि लिबाङमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएको छु । काम विशेषले म घर पुग्नु पर्ने भयो । नियमित वर्षातको कारण खोला नालाहरुमा पानीको बहाब बढेको छ । तर, वर्षातको प्रभावह नगरी म घरतिरको यात्रामा निस्केँ । सडक खण्डमा माथिबाट पहिलो, ढुङ्गा खस्ला ! भनेर म धेरै सजक हुँदै वरपर त हेरेँ । सिमसिम वर्षतको कारण परेमा खोलाको पानीको बहाब कति बढेको छ ? भन्ने प्रश्नले मलाई धेरै सतायो । म यस्तै यस्तै प्रश्नहरुका साथ परेमा खोलामा पुगेँ । तर, म यो खोलामा एक्कलै खोला तर्ने आँट पनि आएन । अन्य साथिहरु नभएकोले म आत्म बल सहित खोला तरेँ । खोला तर्दै गर्दा धेरै डर लागेयो । तर, खोला पार गर्नेको कुनै विकल्प नै थिएन । यस्तै यस्तै डरको बीचमा खोला तँ पार गरेँ । यो खोलामा पानीको बहाब धेरै भए त मलाई खोलाले बगाउथ्यो ।’
‘यस जिल्लामा विगतको तुलनामा भौतिक विकास धेरै भएको छ । तर, यो खोलामा मानिस आवतजावतका लागि सानो पुल निर्माणमा किन ध्यान पुगेको छैन ? धेरै योजनामा विनियोजित वजेट समयमा नै कार्यन्वय नभई फ्रिज भएका छन् । यस्ता अति आवश्यक ठाउँमा वजेट विनियोजितिर ध्यान वडा कार्यालय, नगरपालिकाको ध्यान दिनु पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘यो खोलाको छेउमा छहरा बनेकोले मानिसलाई पानीको बहाबले ढलायो भने बाच्ने आशा छैन । यो खोलामा ठूलो पुल निर्माण गर्न आवश्यक छैन । तर, मानिसहरु सहज आवतजावत गर्न मिल्ने पुल निर्माण गर्न आवश्यक छ । नागरिकको आधारभूत आवश्यकता समयमा नै पूरा भए सरकार गाउँ गाउँमा आएको महशुस गर्न सक्छन् । आफ्नो ज्यानको सुरक्षामा आम नागरिकहरुलाई सहयोग पुग्ने थियो ।’ वडा अध्यक्ष गणसिंह पुनमगरले भन्नुभयो¬‘यो खोलामा पानीको बहाब बढेमा मानिसहरुलाई आवतजावतमा समस्या छ । पछिल्लो समयमा स्थानीयबासीहरुबाट यस क्षेत्रमा मानिस आवतजावतमा सहज बन्ने गरी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा वडा कार्यालयबाट विशेष पहल गदर्नछ ।’
पछिल्लो समयमा स–साना योजनाहरुमा त जनप्रतिनिधिहरुले वजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पर्दैन । तर, नागरिकको माग सम्बोधन नुहँदा निराशमै छन् । विगतदेखि यस जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका मानिसहरु लिबाङसम्म पुग्ने यो खोलाको बाटो पनि एक हो । तर, यस खोलामा वारपारमा पुलको व्यवस्था नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य थिए । पक्की पुलको व्यवस्था नभएपनि काठे पुल निर्माणले ति क्षेत्रका नागरिकहरुको यात्रामा थप सहजता बनेयो । सडक विस्तारसँगै यो खोला फराकिलो बनेको हुँदा काठे पुलको व्यवस्थापनमा त्यति उपयुक्त छैन । वर्षातको समयमा पनि यातायात साधानहरु नियमित सञ्चालनले धेरै मानिसहरुलाई पुलको माग भएन । तर, नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणको लागि जारी यातायातका साधानहरु बन्द हुँदा वर्षात समयमा मानिसहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । पानीको बहाब बढि भएको अवस्थामा जिप, मोटर साइकललाई नै बगाउन सक्ने क्षमता भएको खोलामा मानिसको त के उपया पो लाग्छ र ? खोलाको सडक खण्डबाट यातायता साधान वा मानिसलाई पानीको बहाबले ढल्यो भने बाच्ने आशा नै छैन ।
धेरै मानिसहरु आफ्नो मुर्खताकै कारण जवरजस्ति खोला तर्ने आँट गर्दछन् । यो मुर्खता नै जीवनभरिको कम्जोरी मात्र होइन सदाका लागि घर परिवार, आफन्तजनबाट टाढा बन्नु पर्ने कुनै समय हुन सक्छ । यस्ता जोखिमपूर्ण कुरामा समयमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ । होइन, भने हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुतोको कुनै विकल्पन छैन । राज्य पुर्नर संरचना पश्चात् धेरै काम स्थानीयतहमा हुने भएकोले यस सडक खण्डमा विगतको तुलनामा मानिसहरुको चहलपहलमा कमी छ । तर, सडक विस्तारले गर्दा यो समयमा पनि घर्तीगाउँ, मिरुल, कुरेली, थबाङ, बागमाराम, तालाबाङ सहित पश्चिम क्षेत्रमा नियमित रुपमा जिपहरु सञ्चालन छन् । पदैल यात्राहरुको संख्या घट्दै जाँदा यस खोलामा सानो पुल निर्माण कार्यमा चाँसो नदिन सक्छन् । पछिल्लो समयमा माडिचौर, घापा, निम्री, माठ्ला, दाङमाङ, कोर्चाबाङतिर, भाबाङतिरका मानिसहरु पदैल यात्रा गर्दै आएका छन् । घर्तीगाउँ आसपासका मानिसहरु सदरमुकाम लिबाङसँग जोड्ने महत्वपूर्ण खोला हो । तर, विगतमा सडक विस्तार नुहँदा पनि विगतमा पनि वर्षातको समयमा जोखिमै मोलेर खोला तर्न बाध्य थिए । यस खोलामा मानिसहरुलाई सहजै रुपमा आवतजावत गर्न मिल्न सक्ने पुल निर्माण गर्न सकिएमा आम नागरिकहरु ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्थे भने घरपरिवारलाई पनि आफन्तको यात्रा सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुन्थे । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।